Maqaallada tayada leh - Vondt.net
Kaydinta Qaybta: Mawduucyada Tayada leh
6 Calaamadaha iyo Calaamadaha Kansarka Maskaxda
21 / 08 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles/av waxyeelladayda
Halkan waxaa ah 6 astaamood iyo astaamaha kansarka maskaxda kaas oo kuu oggolaanaya inaad garato xaaladda marxaladda hore isla markaana aad hesho daaweynta saxda ah. Cilad-baarista hore waa mid aad muhiim u ah si looga hortago horumarinta kansarka. Midkoodna calaamadahan iskood ugama jeedaan inaad qabtid kansarka maskaxda, laakiin haddii aad isku aragto astaamo badan, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto qolka gurmadka ama GP gaaga si aad ula tashato. Ma leedahay talo bixin Xor ayaad u tahay inaad isticmaasho goobta faallooyinka ama nala soo xiriir Facebook eller YouTube.
Astaamaha kansarka maskaxda waxay noqon karaan kuwa gaar ah iyo kuwo guudba. Fadlan la soco in liistadan aysan ka muuqan dhammaan calaamadaha suurtagalka ah sidoo kale waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay waxyaabo aan ka aheyn buro ama kansarka maskaxda.
1. Madax xanuun
Calaamadda guud ee buro maskaxda ku jirta waxay ku lug yeelan kartaa madax -xanuun daran oo aan la kulmin “madax -xanuun caadi ah”. Madax -xanuunku inta badan wuu ka sii daraa dhaqdhaqaaqa iyo subaxda hore. Sidoo kale isha ku hay in madax -xanuunku marar badan dhaco iyo in si tartiib tartiib ah uga sii daraan.
Sababta caamka ah: Sababta ugu badan ee madax xanuunka waa cillad la'aan muruqyada iyo kala-goysyada - badanaa waxaa sababa shaqo badan oo soo noqnoqota, dhaqdhaqaaq yar oo nolol maalmeedka ah iyo culeys fara badan. Raadi baaritaanka lafopractor ama jimicsiga jirka haddii aad ku xanuunsato madax xanuun joogto ah.
2. Suuxdinta mootada / dhaqdhaqaaqa aan la xakamayn
Isku-wareejin lama filaan ah iyo dhaqdhaqaaqa muruqyada. Waxa kale oo loo yaqaan gariir. Dadku waxay la kulmi karaan noocyo kala duwan oo suuxdin ah.
3. Lalabo / matagid
Dadka ay dhibaatadu saameysey waxay la kulmi karaan lallabbo iyo matag iyaga oo aan sharaxaad wanaagsan ka bixin tan - sida jirro. Maaddaama xaaladdu ka sii darto, waxay sidoo kale dhici kartaa marar badan.
4. Isu dheellitir dhibaatooyinka iyo wareerka
Dareemay xasillooni la'aan iyo sidii wax walba oo kugu wareegaaya? Dadka qaba kansarka maskaxda waxay badanaa dareemaan dawakhaad, madax-fudeyd iyo sidii iyagoo aan awoodin inay iswaafajiyaan.
Sababaha caadiga ah: Da'da kordha waxay ku dambayn kartaa isku-dheelitir liidata iyo heerarka dawakhaka badan. Waxaan markaa kugula talineynaa inaad si joogto ah u dhaqdhaqaaqdo.
5. Isbedelada dareenka
Dadka ay waxyeeladu soo gaadhay waxay awoodi doonaan inay la kulmaan isbeddelo aragga, maqalka, dareenka iyo dareenka urta.
Ma dareentaa daal joogto ah? Daalka iyo daalka dabadheer waxay dhici karaan marka jirku uu saameeyo jirro ama ogaanshaha cudurka, laakiin sidoo kale waxaa sababi kara xaalado guud sida niyad jab iyo buufis.
Calaamadaha kale waxaa ka mid noqon kara xasaasiyad fudud, gacmaha iyo lugaha qabow, neefsashada degdega ah iyo suuxdinta. Astaamo gaar ah oo gaar ah ayaa laga yaabaa inay ku dhacaan qaabab gaar ah oo kansar maskaxda ah.
Maxaad sameyn kartaa haddii aad qabto kansarka maskaxda?
- Kansarka maskaxdu wuxuu noqon karaa xaalad naf-gooya - oo, sida la ogsoon yahay, wuxuu ku dhici karaa qaab xun iyo mid xunba. Haddii aad ka shakisan tahay inaad qabtid cudurkaan, fadlan la xiriir qolka gurmadka ama GP-gaaga sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si baaritaan dheeraad ah iyo daaweyn laguugu sameeyo.
QODOBKA KOOWAAD: - Daaweynta cusub ee loo yaqaan 'Alzheimer' waxay soo celin kartaa shaqadii xusuusta oo buuxda!
Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto maqaalkan asxaabtaada, asxaabtaada iyo dadka aad taqaan. Haddii aad rabto macluumaad dheeri ah ama wixii la mid ah, waan ku weydiineynaa sida oo aad la xiriirtaa adigoo adeegsanaya bogga Facebook iyada. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waa iska caadi si aad noola soo xiriirto (gebi ahaanba bilaash ah).
Raadi daaweyn hadda - ha sugin: Ka hel caawimaad dhakhtar si aad uhesho sababta. Sidan oo kaliya ayaa aad ku qaadi kartaa tillaabooyinka saxda ah ee dhibaatada looga takhalusi karo. Dhakhtarka ayaa kaa caawin kara daaweynta, talobixinta cuntada, jimicsiyo gaar ah iyo fidinta, iyo sidoo kale talobixinta ergonomic si loo bixiyo horumar shaqo iyo calaamado labadaba. Xusuusnow waad awoodaa na weydiiso (si qarsoodi ah haddii aad rabto) iyo dhakhaatiirtayada bilaashka ah haddii loo baahdo.
Ma ogtahay in: - Daaweynta qabow waxay yareyn kartaa xanuunka xanuunka iyo kala goysyada murqaha? Waxyaabaha kale, Biyo qabe (halkan waad ku dalban kartaa), oo ka kooban inta badan alaabada dabiiciga ah, waa badeecad caan ah. Nagala soo xiriir maanta boggayaga Facebook, markaa waan ka jawaabi karnaa wixii su'aalo ah ee aad qabtid.
Sidoo kale aqri: - 8 Jimicsi oo loogu talagalay Jilbaha Xun
Sidoo kale aqri: - Ma tendonitis ama tendon DHALO?
Sidoo kale aqri: - 5 Jimicsi Wanaagsan oo Lagaga Hortago Sciatica
Raac Vondt.net on YouTube
Raac Vondt.net on Facebook
(Waxaan isku dayeynaa inaan ka jawaabno dhammaan fariimaha iyo su'aalaha 24-48 saacadood gudahood. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa inaad tarjunto jawaabaha MRI iyo wixii la mid ah.)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/hjernekreft.jpg?media=1648573622 400 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-08-21 10:10:052022-03-18 17:27:526 Calaamadaha iyo Calaamadaha Kansarka Maskaxda
6 Calaamadaha iyo Calaamadaha Cudurka Qoorgooyaha
20 / 08 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles/av waxyeelladayda
Halkan waxaa ah 6 astaamood iyo astaamaha menanjiito kaas oo kuu oggolaanaya inaad garato xaaladda marxaladda hore isla markaana aad hesho daaweynta saxda ah. Cilad-baarista hore waa mid aad muhiim u ah si looga hortago horumarka nolosha ee halista ah ee qoorgooyaha. Midkoodna calaamadahan oo keliya macnaheedu maahan inaad qabtid cudurka qoorgooyaha, laakiin haddii aad isku aragto astaamo badan, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto qolka gurmadka ama GP-gaaga si aad ula tashato. Ma leedahay talo bixin Xor ayaad u tahay inaad isticmaasho goobta faallooyinka ama nala soo xiriir Facebook eller YouTube.
Qoorgooyaha, oo sidoo kale loo yaqaan meninjaytis, waa caabuq / caabuq ku dhaca tuubooyinka ku xeeran maskaxda iyo xudunta laf-dhabarka. Xaaladda way fidi kartaa oo uga sii dari kartaa haddii la daweyn waayo. Waxaan ognahay in qoorgooyaha sababa fayrasku inuu aad uga yar yahay kuwa ay sababaan bakteeriyada.
Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan uguna caansan ee qoorgooyaha ayaa ah finan yaryar oo casaan ah oo aan si ku meelgaar ah u baabi'in cadaadis (tusaale ahaan adigoo galaas ku cadaadinaya finanka) - baaritaankaan waxaa loo isticmaalaa in lagu arko haddii finanku ay ka dhashaan dhiig ku sumow, taas oo ku timaadda infekshanka. Finanku badanaa waxay ku bilowdaan dhibco yar yar oo casaan ah ka hor intaysan si tartiib tartiib ah isugu beddelin dhibco waaweyn oo ugu fida jirka oo dhan. Way adkaan kartaa in lagu arko wajiga bilowga - sidaas darteed sidoo kale xusuusnow inaad hubiso dusha sare sida gudaha baabacooyinka iyo cagaha cagaha. Firiiricani kuma dhacdo gabi ahaanba kiisaska, laakiin badankood.
Infekshanka awgiis, dadku waxay la kulmi doonaan in jidhku galo "xaalad qandho" si uu isugu dayo oo ula dagaallamo caabuqa. Qandhada meningitis -ku waxay caadi ahaan ka sarrayn doontaa 37.5 digrii.
Dadka ay saameeyeen mininjaytis waxa laga yaabaa inay ogaadaan in qoortu adkaato oo si gaar ah xagga hore u leexinta (taas oo ku darsaneysa xiisadda xudunta laf-dhabarka) way adag tahay in la sameeyo.
4. Madax xanuun iyo xanuun
Infekshinka jirka ku sii kordha awgood, qofku wuxuu badanaa lahaan doonaa madax xanuun waxaana laga yaabaa inuu dareemo lallabbo iyo xanuun la'aan - sidoo kale matag ayaa jiri doona maaddaama xaaladdu ka sii dareyso.
5. Xanaaq iyo wareer
Dadka ay waxyeelleeyaan waxay noqon karaan kuwa xanaaq badan isla markaana dareemaya hoos u dhac xagga tamarta ah, iyo sidoo kale jahwareer / wax ka bedelka shaqada garashada.
6. Muruq iyo kalagoys xanuun
Xanuun ku dhaca kala-goysyada iyo muruqyada ayaa sida caadiga ah ku dhaca mininjaytis. Gaar ahaan qoorta ayaa laga yaabaa in la kashifo.
Calaamadaha kale waxaa ka mid noqon kara xasaasiyad fudud, gacmaha iyo lugaha qabow, neefsashada degdega ah iyo suuxdinta.
Maxaad sameyn kartaa haddii aad qabto meninjaytis?
- Cudurka qoorgooyaha wuxuu noqon karaa xaalad nafta halis gelisa. Haddii aad ka shakisan tahay inaad qabtid cudurkaan, fadlan la xiriir qolka gurmadka ama GP-gaaga sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si baaritaan dheeraad ah iyo daaweyn laguugu sameeyo.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/hjernehinnebetennelse.jpg?media=1648573622 469 750 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-08-20 13:12:242022-03-18 17:27:496 Calaamadaha iyo Calaamadaha Cudurka Qoorgooyaha
Bogga 1 ee 80123>»